हल्ला भन्दा फरक ओली सरकारको काम – Loktantrapost Loktantrapost
हल्ला भन्दा फरक ओली सरकारको काम
२२ बैशाख २०७८, बुधबार १२:४०
सामाजिक सञ्जाल खोल्यो, पत्रपत्रिका हेर्यो सबैतिर नकारात्मक समाचार मात्रै देख्न पाइन्छ । फलानो ठाउँको पुल भाँच्चियो, यता कालोपत्रे उक्कियो, उता मेलम्चीको पाईप फुट्यो र यस्तै यस्तै । तर के सबै विकासका आयोजनाहरु यस्तै कमजोर, कमसल र आँखामा छारो हाल्ने गरी मात्रै छन् त ? गलत ! नेपालमा ऐतिहासिक विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् ।
बाटाघाटा, पुल, विद्यालय, अस्पताल निर्माण जस्ता भौतिक विकासका साथै आर्थिक र समाजिक विकास पनि निकै भएको छ । तर अपत्यारो लाग्दो र सामान्यत ः मिडियामा सुन्न नपाईने भ्रष्टाचार विरुद्धका सरकारका कार्यहरु र उपलब्धीका तथ्यहरु केके छन् त ?
इतिहासकै भ्रष्ट सरकार कुन हो भनेर कसैलाई प्रश्न गरियो भने जवाफमा ‘ओली सरकार’ नआउला भन्न सकिँदैन । किनभने मिडियाको प्रचार नै यसरी भएको छ । तर यथार्थमा भ्रष्टाचार बारे खोज गर्ने र समाचार बनाउने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेस्नलको तथ्यांकले नै नेपालमा विगत भन्दा भ्रष्टाचार घटेको छ भनेर भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा आउँदा नेपालको Corruption Perception Index -CPI Score–२९ थियो, तर आज त्यो बढेर ३४ भएको छ । अंक बढ्नु भनेको भ्रष्टाचारमा गिरावट आउनु हो । अर्थात्, नेपालको ईतिहासमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट सरकार नै ओली सरकार हो ।
१) तीन बर्षका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तथ्याङ्कहरु केके छन् त ?
भ्रष्टाचार, राजश्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कुल १,१५४ मुद्दा दर्ता भएका मध्ये ७३६ मुद्दा दायर भएका छन् र बिगो दाबी ४ हजार ८१० करोड गरिएको छ ।
क) राजश्व चुहावटको कसुरका २१५ मुद्दामा ७५५ जना विरुद्व ३२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ ।
ख) विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा ४४० जना विरुद्ध १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।
ग) झुटा नक्कली बिजक खरिद गर्ने ५२ फर्मलाई ४ अर्ब ६१ करोड बढी बिगो कायम गरी संलग्न व्यक्ति बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ र झुठा कागजात जारी गरी राजस्व चुहावट गर्ने १२७ फर्मलाई १० अर्ब ६८ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
ओली सरकारमा आइकन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतभन्दा साढे दुई गुणा बढी मुद्दा दर्ता गरेको छ र बिगो दाबी रकम पनि ६ गुणा बढीले बढेको छ ।
२) भू–माफियाहरुबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता
कतै नक्कली मोही खडा गरी बिक्रि गरीएको जग्गा, त काहीँ अनेक जालसाजी गरी हडपिएको सयौँ विघा जग्गा ओली सरकारले फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ । सिराह, सर्लाही र बर्दिया जिल्लाको ३०१ बिघा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता भएको छ । माथिल्लो त्रीशुली एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि भोगाधिकार दिएको ११० रोपनी जग्गामा खडा गरिएको नक्कली मोही खारेज गरी त्यसलाई पनि फिर्ता गरिएको छ ।
हल्ला भन्दा यथार्थ निकै अलग हुन्छ । अहिलेको समयमा एक सचेत नागरिकले सरकारको कामहरु र प्रगतिहरु बारे आफैँ पनि खोज गर्नु आवश्यक छ । यस्ता धेरै तथ्य र यथार्थहरु छन्, जसबाट हामी अनविज्ञ छौँ । हामी सबैले खोज गर्न, बुझ्न र यथार्थ पत्ता लगाउन आवश्यक छ ।